पत्रकारको दशै : सञ्चार गृहमै खटिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्व हो - Tulsipur Online
पत्रकारको दशै : सञ्चार गृहमै खटिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्व हो
Posted by News Desk | १२ आश्विन २०७४, बिहीबार १७:५९ |
नेपालीहरुको महान पर्व दशैं घरदैलोमा भित्रिसकेको छ। हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं दैलोमै भित्रिएसँगै सप्तमीदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा सार्वजनिक विदा भइसकेको छ। बजारमा पनि दशैंको चहलपहल अत्यधिक रुपमा बढेको छ, किनमेलमा सबै व्यस्त देखिन्छन्। पसलेहरुलार्य किनमेलमा आएका ग्राहको भिड थामिनसक्नु छ। तर, दशैं घरघरमा भित्रिसकेको भएपनि पत्रकारहरुलाई भने दशैंले अझै छोएको जस्तो देखिँदैन।
छापा माध्यमहरु प्राय बन्द रहेपनि अनलाइन, रेडियो र स्थानीय टेलिभिजनहरु सञ्चालनमा भने पत्रकारहरु दशैं नभनेर नियमित कामकाजमा अभ्यस्त छन्। यही परिवेशमा पत्रकार ध्रर्वराज न्यौपानेले रेडियो सञ्जिवनीका स्टेशन म्यानेजर एवं रपोर्टर्स क्लब नेपाल दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादिक अंशः
डिआरएनः कस्तो लागिरहेको छ, दशैं? संक्षिप्तमा बताइदिनुस् ?
रेग्मीः धन्यवाद डिआरएनजी, अहिले नेपालीहरुको महान पर्व हरेक नेपालीको दैलोमा भित्रिसकेको छ। सर्वप्रथम मैले आम नेपालीहरुलाई विजया दशमीको शुभकामना टक्रयाउन चाहन्छु। बजारमा किनमेलको चहलपहल बढिरहेको छ ।
हरेक व्यवसायीहरु यतिवेला सामान विक्री गर्न व्यस्त छन् । तर, हामी पत्रकारहरुले भने आफ्नो सञ्चार माध्यममार्फत स्रोतालाई सूचना र मनोरञ्जन दिनु पर्ने हुन्छ। जनतालाई सुचना र समाचार उपलव्ध गराउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि भएकाले अहिले हामी सञ्चार माध्यममै खट्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई बाध्यता भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपमा हामीले लिएका छौं ।
डिआरएनः बजारमा सबै कर्मचारीहरुले सपिङ गरी पारिवारिक जमघटमा जुटिरहेको अवस्थामा पत्रकारहरु भने सन्चारगृहम खटिरहनुपर्ने अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ?
रेग्मीः अहः त्यस्तो नरमाइलो भएको छैन। म जस्तै मिडियामा धेरै साथीहरु पर्व नभनेरै मिडिया हाउसमा खटिरहेका छौं। जुन हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। केही समय निकालेर मिडियाकर्कीहरुले चोकका पसलमा भेला भएर चियापानबाहेक अरु फुर्सद निकाल्नै मुस्किल छ। तैपनि हामीले यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं।
डिआरएनः पछिल्लो समयमा पर्वमा धेरै तडकभडकको प्रवृति पनि देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
रेग्मीः पर्वमा मनोरञ्जन गर्ने अवस्थामा अन्यथा लिनुहुँदैन। तर, पर्वले आम नेपालीहरुलाई ऋण बोकाएर जाने अवस्था हुनुहुँदैन। घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्दछ। त्यसैगरी मनोरञ्जनका नाममा जुवातासको पनि संस्कृति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। यसलाइ्र्र हार जितको रुपमा नलिएर मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै बनाउनु पर्दछ भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु।
डिआरएनः दशैं र तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा धेरै समस्या देखिएका छन्। रंगिन मिठाइहरुदेखि मिसावटयुक्त खाद्य सामाग्रीहरु र विभिन्न रसायन मिसाइएका फलफुलपनि, यसमा जागरण ल्याउनुपर्ने मिडियाको दायित्व होइन र?
रेग्मीः अवश्य पनि हो। पर्वमा खानपानलाइ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिले अर्गानिक खाद्यान्न पाउनै मुस्किल छ। त्यसैले पर्वका विषयमा खानपानमा ध्यान दिइएन भने त्यसले मानव स्वास्थ्यलार्य गम्भीर असर गर्न सक्दछ।
त्यसैले फलफुलदेखि मासु किन्दा समेत उपभोक्ताहरुले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसैगरी विशेषगरी पर्वका वेला स्थानीय प्रशासनले पनि बजारमा यस्ता सामाग्रीहरुको विक्री वितरणका सन्दर्भमा विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ।
अर्को कुरा पर्व भन्दैमा अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर पर्व मनाउनु पनि उपयुक्त होइन। बरु, मनोरञ्जनका लागि जिल्ला लगायत नजिकका धार्मिक क्षेत्रमा पारिवारिक भ्रमणबाट पनि थप मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। यसले आत्म सन्तुष्टिसंगै मनशान्ति पनि हुन सक्छ।
डिआरएनः अन्त्यमा नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीका सन्दर्भमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि?
रेग्मीः अन्त्यमा आम नेपालीहरुलाई शुभ विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ७ दशकको आन्दोलनपछि बनेको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ। कार्यान्वयन हुन अव प्रदेश र संघको निर्वाचन मंसिरमा हुँदैछ।
दुर्गाभवानीले नयाँ संविधानलाई क्रियाशिल बनाउन यी दुवै तहका निर्वाचन निर्धारित समयमै सपन्न गर्ने शक्ति नेताहरुलाई दिऊन्, भन्न चाहन्छु। नेपालीहरुले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै लोकतन्त्रको सुगन्धको अनुभुति हुन सक्छ। आम नेपालीहरुलाई समृद्धिको शुभकामना।
Previousदशैं खर्च कटाएर दाङमा मिर्गाैला पिडितलाइ आर्थीक सहयोग
Nextसुत्केरी भत्ताले ल्याउने परिवर्तन